အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ငွေကျပ် (၂)​ သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ ဂိမ်းဆော့ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Triple Camera နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရှယ်ရိုက်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးချယ်စရာ Smartphone လေးတခုဖြစ်တဲ့ realme C3 လေးအကြောင်း Real Hands-on Review! လေး တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Hands-on Review! လေးဖြစ်တာမို့ စာလေးတော့အနည်းငယ်ရှည်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရင်ဦးဆုံး realme ရဲ့ အရောင်အဝါလေးနဲ့ Packing ဗူးလေးကို ဖောက်လိုက်တာနဲ့ Hey, welcome to realme Family ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ SIM Pin ရယ် Quick Guide စာအုပ်လေးတွေရယ်ထည့်ထားတဲ့ ...
10th Anniversary Device အနေနဲ့ MI 10 Ultra ကို Xiaomi က မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ် ..။ မိတ်ဆက်သွားသလောက်ကိုပဲ သိရသေးတော့ အရမ်းအများကြီးတော့ မပြောတော့ပါဘူး ..။ ကြွေမိတဲ့အချက်တွေကိုပဲ ပြောပြပါမယ် ..။ ✅ Design ပိုင်း လုံး၀ မြင်လိုက်တာနဲ့ ကိုင်ချင်စရာပါ .။ ✅ 120Hz Refresh Rate AMOLED True Color Display ✅ 120W Fast Charging (amazing 😱) Camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ - 48MP Ultra-clear Primary Lens 48MP Periscope Telephoto lens (120x Digital Zoom, 10x Optical Zoom) 20MP Ultra-Wide Lens (128°) ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...ဒီတပါတ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Win Mobile World အားပေးသူမိတ်ဆွေများအတွက် Apple WATCH အကြောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ။ Apple WATCH ကို 2015 ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Smart Watch တွေထဲမှာတော့ အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး၊ လူကြိုက်အများဆုံး Apple Products တခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆိုပါ Apple WATCH ကို Luxury (တန်ဖိုးကြီး) နာရီတခုအဖြစ်လည်းဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ အားကစားလုပ်ရာမှာအထောက်အကူပြုတဲ့ Sport Type ပစ္စည်းတခုအဖြစ်အသုံးပြုကြပြီး၊ တချို့ကကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...Apple HomePod ဟာ iPhone X နဲ့အတူ ပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ February9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး Apple ကနေစတင်ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ Win Mobile World မှာလည်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Apple Crazy မိတ်ဆွေတွေကို Apple HomePod လေးအကြောင်း သေချာလေးရှင်းပြေပေးပါရစေခင်ဗျာ။Apple HomePod ဆိုတာ Apple ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Wireless Speaker တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Siri ကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် သီချင်းရှာခိုင်းတာတွေ၊ ရပ်ခိုင်းတာတွေနဲ့ တခြား...
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ...HUAWEI ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ AI Camera (၅) လုံးထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ HUAWEI Nova 5T ကို ကျွန်တော်တို့ Win Mobile World မှာ Pre-order Fees - 30,000 Ks နဲ့အတူ 9.9.2019 ကနေ 27.9.2019 အထိ Pre-order လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Pre-order တင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် Stereo Speaker ဖြစ်တဲ့ HUAWEI Mini Speaker ကို Pre-order Gift အဖြစ်ပေးသွားဦးမှာပါ။ ဆိုတော့ Pre-order မတင်ခင် ဝယ်ယူလိုတဲ့ မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ Specs တွေနဲ့ ပေးရတဲ့ စျေးနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီပါ့မလား၊ အဆင်ပြေပါ့မလား စတဲ့စတဲ့ အတွေ...